Ma Rumaysan Kartid: Qiimaha Raqiiska Ah Ee Ay Liverpool Ku Diidday Saxeexa Difaacii Ay Tijaabisay Xilli Ciyaareedkii Hore - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMa Rumaysan Kartid: Qiimaha Raqiiska Ah Ee Ay Liverpool Ku Diidday Saxeexa Difaacii Ay Tijaabisay Xilli Ciyaareedkii Hore
Ma Rumaysan Kartid: Qiimaha Raqiiska Ah Ee Ay Liverpool Ku Diidday Saxeexa Difaacii Ay Tijaabisay Xilli Ciyaareedkii Hore
July 14, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa iska diidday inay la saxeexato difaaca reer Turkey ee Ozan Kabak oo qiime dhimis aad u weyn loogu sameeyey intii hore ay ugula heshiisay Schalke 04 oo ay qaab amaah iyo heshiis is-wata oo dookh ah kagala soo wareegtay bishii January.
Liverpool ayaa bishii January heshiis amaah ah kusoo qaadatay laacibka reer Turkey ee Ozan Kabak, waxaanu heshiisku dhigayay in haddii ay Reds ku qanacdo laacibkan ay si rasmi ah ugula wareegi karayaan £18 milyan oo Gini, hase yeeshee Liverpool ayaa go’aansatay in ay iska celiso laacibkan.
Sida ay warbaahinta Ingiriisku sheegtay, Schalke ayaan diyaar u ahayn in uu Kabak dib ugu soo laabto iyadoo hoos u dhac weyni ku yimid, isla markaana u baahnayd lacag.
Kooxda reer Germany ayaa u sheegtay Liverpool in kaliya ay bixiso £8.5 milyan oo Gini oo ay si rasmi ah u haysato Ozan Kabak, tobankii milyan ee kale ee ku jiray heshiiskii horena qiime dhimis looga dhigay.
Laakiin tababare Jurgen Klopp oo qiimayn ku sameeyey laacibkan muddadii uu Anfield joogay iyo maamulka kooxda ayaa go’aansaday in ay bixiyaan £1 milyan oo Gini oo ahayd lacagtii deynta ciyaartoyga iyo £500,000 Gini oo kale oo ahayd lacagtii wada-xajoodyada iyo qandaraaska uu laacibkaasi ku yimid Premier League.
Liverpool ayaa markaas kaddib lasoo saxeexatay difaaca reer France ee Ibrahima Konate oo ay bishii May kala soo wareegtay RB Leipzig, iyadoo bixisay lacagtii ku xidhnayd qandaraaskiisa oo gaadhaysay £35 milyn oo Gini.
Si kastaba, Ozan Kabak ayaa Liverpool u saftay 13 ciyaarood isagoo ka garab ciyaray Phillips, waxaanu iskaashigoodu keenay in kooxdu timaaddo kaalinta saddexaad ee horyaalka xilli ay ka maqnaayeen Virgil van Dijk, Joe Gomez, Jordan Henderson iyo Joel Matip.